WhatsApp iri kushanda pane chishandiso cheWindows uye Mac | IPhone nhau
WhatsApp iri kushanda pane chishandiso cheWindows uye Mac
WhatsApp yakagara ichizivikanwa nekuita zvinhu panguva yako wega. Zvishoma nezvishoma asi nekumira kuzhinji munzira. Muchokwadi, iko kukwikwidza mameseji kunyorera mukati mekambani yayo, Facebook Messenger haimire kuwedzera mabasa matsva, mazhinji acho anowanikwa muTeregiramu kwenguva yakareba, mameseji application ayo vanhu vanoda kana kwete, isu tinofanirwa kutora sereferensi izvozvi Pavel App yaDurov ndiyo imwe tungamira kana uchiwedzera maficha mune aya marudzi ekushandisa. Teregiramu ine zvinoshandiswa zvePad, Mac, Windows uye Linux.
Nekudaro, WhatsApp inotibvumidza chete kushandisa yako sevhisi kuburikidza newebhu webhusaiti iyo inosiya zvakawanda kuda pamusoro pekupa kupa kutsamira pane iyo iPhone inotadzisa mashandiro ayo. Zviya, Nhau iPhone yakagadzira chiteshi paTeregiramu Kwaunogona kujoina kuzoziviswa nguva dzese dzenyaya dzese dzakatenderedza iyo iPhone kunyanya uye Apple mune zvese.
Mazuva mashoma apfuura takaburitsa chinyorwa chatakakuratidza zvese zvatinogona kutarisira kubva kuWhatsApp mumwedzi iri kuuya, sarudzo dzinofanirwa kunge dzave kuwanikwa mumeseji sevhisi kwenguva yakareba asi zvisinganzwisisike hazvisi. Asi pamusoro pezvese izvo zvatingatarisira, mufananidzo watinoona «Dhawunirodha yeWindows» uye «Mac kana Windows» yasvinwa zvakare kuburikidza neshanduro yeshanduro yeshanduro, iyo inotipa kuti tinzwisise kuti Iyo Kambani iri kushanda zvishandiso zviviri, imwe yeimwe yeanonyanya kushandiswa masisitimu anoshanda. Parizvino hapana vhezheni yakarongerwa Linux.
Parizvino yega yega yega yekubuda kwakauya kuburikidza neshanduro yeWhatsApp yekushandura zvazadzika, nekukurumidza kana kumberi, saka zvese zvinoita senge zvinoratidza kuti mumwedzi iri kuuya tichakwanisa kunakidzwa nechishandiso chekushandisa cheWindows kana Mac uye nekudaro torega kushandisa inotyisa sevhisi webhu yatinopihwa nechikumbiro uye inoderedza kwazvo mikana yayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp iri kushanda pane chishandiso cheWindows uye Mac
Deibris Alexis Aguilera akadaro
Pindura kuna Deibris Alexis Aguilera
Kubva mukusaziva kwangu ... zvinoita musiyano upi kuti vaburitse Anwendung ye windows / mac? Kana paine atove echitatu-bato kunyorera kumhanya WhatsApp pamakomputa uye iwo akangoipa sezvakaita WhatsApp webhu. Dambudziko rinowanikwa mukugadziriswa kweWhatsApp pachayo, izvo zvinoita kuti zvive zvisingaite kuti app ishandise sevhisi nenzira kwayo.
Musiyano uripo pakati peTeregiramu / Facebook ndewekuti maapplication aya anovandudzwa kuti ashande mugore, saka patinoisa zvekare maapplication aya kutaurirana kunoonekwa sekuvasiya kwatakaita.
Chero bedzi vasingazonyorazve iyo kodhi yeWhatsApp, ichaenderera ichiri chechipiri-chikamu chikumbiro ...
Pindura kune djdared
Ichokwadi chaizvo kuti haizove akawanda-mudziyo, ichave iyo yewebhu vhezheni mune inoitisa uye ale yatovepo
Anogadzira anomhanyisa Windows 95 pane Apple Watch
Joinha iyo Teregiramu Channel yeActualidad iPad